DEG-DEG: Barcelona Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Saxeexeedii Ugu Horreeyay Xagaaga & Midka Xiga Oo Lasii Ogaaday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Barcelona Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Saxeexeedii Ugu Horreeyay Xagaaga & Midka Xiga Oo Lasii Ogaaday
DEG-DEG: Barcelona Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Saxeexeedii Ugu Horreeyay Xagaaga & Midka Xiga Oo Lasii Ogaaday
May 31, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 1
Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay saxeexa weeraryahanka ree Argentina ee Sergio Aguero oo noqonaya heshiiskii koowaad ee ay xagaagan si rasmi ah u hesho iyo ciyaaryahankii koowaad ee kooxda kusoo biira wakhtiga labaad ee madaxweyne Joan Laporta.
Madaxweyne Laporta oo bilo kahor dib loogu doortay jagadiisa kooxda ayaa balan-qaaday inuu suuqa xagaaga sanadkan isbedelo waaweyn samayn doono isla markaana ay toddobaadkan saxeexyo ku dhawaaqayaan.
Aguero ayaa Barca ugu soo biiray heshiis laba sano ah oo gaadhsiisan ilaa 2023 iyadoo 32 sano jirkaas uu qaab xor ah ugaga yimid dhinaca kooxda Manchester City oo heshiiskii uu kula joogay uu ka dhammaaday.
Saxeexa labaad ee ay Barca samaynayso ayaa lagu qiyaasayaa inuu noqon doono Eric Garcia oo isla Man City isaguna qaab bilaash ah kaga tagaya waxaana uu da’yarkaas daafaca dhexe qalinka ugu duugi doonaa kooxdaas heshiis ilaa 2026 ah.
Sidoo kale Blaugrana ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaadhay khadka dhexe ee ree Holland ee Georginio Wijnaldum kaas oo la aaminsan yahay inuu isaguna qalinka ku duugay qandaraas ilaa 2024 ah isla markaana dhawaan la shaacin doono.
Ugu dambayn, Heshiiska labada sano ah ee Aguero ayay Barca ku xidhay qoddob dhigaya in 100 Milyan oo euro walow ay iyagu qaab xor ah hadda ku heleen.
wararka totenham soo gudbi